iPhone 12: ကောလာဟလများ၊ စတင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံး - iPhone News | အိုင်ဖုန်းသတင်း
El iPhone 12၊ iPhone 12 Pro နှင့် iPhone 12 Pro Max iPhone5ရဲ့အနားစွန်းနဲ့စတုတ္ထကင်မရာတို့မှလွဲလို့ဒီဇိုင်းအဆင့်မှာအပြောင်းအလဲမရှိဘဲဈေးကွက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပါ ၀ င်သည် support 5G အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်။
iPhone 12: ရက်စွဲနှင့်ဈေးနှုန်း
အက်ပဲလ်ဟာဒီသတင်းကိုထုတ်လွှင့်ပြသပွဲမတိုင်ခင်လေးနှစ်အနည်းငယ်အထိမထုတ်ဖော်ခဲ့ပေ ၎င်း၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုနှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလ၌ဖြစ်ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ဒုတိယအပတ်တွင်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ယခုနှစ်အလားတူရက်ကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်လိမ့်မည်။
Coronavirus သည် iPhone 12 ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တင်ဆက်မှုကိုပါအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲထားရပါမည်။ သို့သော်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ DigiTimes သတင်းရပ်ကွက်များအရ၎င်း၏ဖြန့်ချိမည့်ရက်သည်အဓိကအပြောင်းအလဲမရှိဟုမျှော်လင့်ရသည်။
၎င်း၏အရွယ်အစားကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခန့်မှန်းထားသည် 6,1 လက်မ သို့သော် LCD မျက်နှာပြင်မှ OLED သို့ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူသူ၏ Refresh rate သည် 60Hz မှ 90Hz အထိပိုမိုကောင်းမွန်သော display ရှိသည်။
ယခင်မော်ဒယ်များ၏စျေးနှုန်းနှင့်ဤမော်ဒယ်သစ်သည်ယူနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ iPhone 12 သည်စျေးနှုန်းထက်ကျော်လွန်နိုင်သည် အခြေခံအကျဆုံးအတွက်ယူရို ၇၉၉၊ iPhone 799 Pro အတွက်ယူရို ၁,၀၀၀ y iPhone 1.200 Pro Max အတွက်ယူရို ၁၂၀၀။ အဆိုပါပစ္စည်းများသည်ယခင်ပစ္စည်းများထက်ပိုမိုစျေးကြီးမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏စျေးနှုန်းအသစ်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်စျေးနှုန်းချိုသာသောမော်ဒယ်လ်ကို iPhone9သို့မဟုတ် SE2အစောပိုင်းတွင်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုမတ်လသို့မဟုတ်2020ပြီလ ၂၀၂ တွင်တွေ့မြင်ရမည်။
အိုင်ဖုန်း ၇ ဒီဇိုင်း
ယိုစိမ့်မှုနှင့်ကောလာဟလများအပေါ်အခြေခံသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အယူအဆများဖြစ်သည် ကင်မရာလေးလုံး အစားယခင်မော်ဒယ်သုံးခုနှင့် ချောချောမွေ့မွေ့အနား ဒါက iPhone5ကိုသတိရစေတယ်။
အဆိုပါထစ်သည်အချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တစ် ဦး အပေါ်အလောင်းအစား Face ID ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းအတွက်လဲလှယ်အတွက်ထစ်၏လျှော့ချရေး။ သို့သော်အခြားလေ့လာသုံးသပ်သူများက၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Touch ID ကိုသာစွန့်ခွာနိုင်ခြင်းသည်တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
ဒီစတုတ္ထကင်မရာက 3D rendering ကိုတိတိကျကျဖော်ပြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ် ထိုကဲ့သို့သော Virtual Reality အဖြစ်ဒြပ်စင်များအတွက်အသုံးဝင်သောအရာဝတ္ထု၏။
သင်သိလိုလျှင် နောက်ဆုံးမိနစ် iPhone 12 နှင့်ကောလဟာလများနှင့်ပေါက်ကြားအားလုံး, သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့၏သတင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ယခု သင်သည် Apple မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော iPhone 12 သို့မဟုတ် 12 Pro ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဒါက Apple ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ ခဏခဏ ဝင်ကြည့်လေ့ရှိတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုပါ…
အသံပြဿနာများနှင့် iPhone 12 နှင့် 12 Pro အတွက်ပြုပြင်ရေးအစီအစဉ်
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
Cupertino ကုမ္ပဏီသည် iPhone 12 မော်ဒယ်အချို့အတွက်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါပြီ။
iPhone 12 မရောင်းချမီ iPhone 13 ရောင်းအားသည်ပုံမှန်ကျဆင်းခြင်းမရှိပေ
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
Apple အတွက်ယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်သည် iPhone ရောင်းအားနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံမှန်အားဖြင့်မကောင်းပေ။
Apple Watch Series6GPS + Cellular နှင့်အခြား Apple ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးလျှော့ပါ
Apple နှင့် Amazon တို့အကြား e-commerce platform မှတဆင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချရန်သဘောတူညီမှုကြောင့် ...
ယခုအခါသင်သည် Apple Store မှရပ်ပြီး MagSafe ဘက်ထရီကိုယူနိုင်သည်
por Tony Cortes လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း .
ကောင်းပြီ၊ Apple စတိုးဆိုင်များတွင် iPhone 12 အတွက် MagSafe ဘက်ထရီများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင် ... ရှိသည်
iPhone 12 က iPhone 11 ထက်လျော့နည်းကျဆင်းသွားတယ်
ငါတို့ရှိသမျှသည် Apple ၏ထုတ်ကုန်များတစ်ချိန်ကအသုံးပြုခဲ့သည်၎င်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်တန်ဖိုးအလွန်ကောင်း
MagSafe ဘက်ထရီအသစ်က iPhone 12 ကိုအတည်ပြုပြီး Reverse Wireless Charging ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း .
Apple က MagSafe ဘက်ထရီအသစ်ကိုလွှတ်လိုက်သည်။
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း .
Cupertino ကုမ္ပဏီသည် iPhone 12 အတွက် MagSafe ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနိုင်ပြီးဘက်ထရီအားသွင်းနိုင်သည်။
ကြော်ငြာအသစ်က iPhone 12 Pro Night Mode ဓာတ်ပုံကိုအထူးဖော်ပြသည်
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း .
iPhone ဟာ့ဒ်ဝဲ၏တိုးတက်မှုများကသုံးစွဲသူများအားပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ...
iPhone 12 အကွာအဝေးဟာရောင်းအားသန်း ၁၀၀ ထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်
Counterpoint Research မှယောက်ျားလေးများသည် iPhone 12 ကိုရောင်းပြီးပြီဟုဖော်ပြထားသည်။
Apple သည် pacemaker မချဉ်းကပ်သင့်သောထုတ်ကုန်များစာရင်းကိုထုတ်ဝေသည်
iPhone 12 ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည့်အခါများစွာသောဆရာဝန်များသည်မျက်လုံးများနှင့်မျက်စိမမြင်ဘဲ ...